Ramadaana 17 fi Injifannoo lola Badri. - NuuralHudaa
Ramadaana 17 fi Injifannoo lola Badri.
Last updated Apr 18, 2022 18
Qophii : Abbaas Ibnul IslamI
Islaamummaa keessatti baatiin Ramadaana baatiiwwan biroo caalaa Muslimoota biratti baatii jabaadha. Baatii kana keessa dalagaawwan gaggaariin Rabbiin biratti dachaa dachaan hisaabamu, baatii araramaa, kan araarama itti argatan, kan ibidda jala bilisa itti bahaniidha. Akkasumas baatii injifannooti. Baatii kana keessa seenaa Islaamaa keessatti Injifannoowwan gurguddoon addunyaa kana jijjiiran hedduun galama’aanii jiru.
Injifannoowwan gurguddoo Baatii Ramadaanaa keessa argaman kan Addunyaa jijjiiran keessaa muraasni Lola Badr Bara Hijraa 2, FATH MAKKAA( Banamuu Makkaa) Bara Hijraa 8, Injifannoo Andaluus Bara Hijraa 91 lola Muslimoota fi Ispeen, Lola Ayin Jaluut Bara Hijraa 658 geggeeffamee fi injifannoowwaan gurguddoon hedduun ji’a Kabajama kana keessatti galmaa’nii jiru.
Lola Badri Bara Hijraa 2
Mushrikoonni Makkaa guyyaa Ergamaan Rabbii ﷺ ifatti bahee waamicha Islaamummaa godhuu jalqabe booda, Isaaf hordoftoota isaa (Sahaabota) “amantaa nuti isiniif fille malee hordofuu hin qabdan” jechuun dhiibbaa gara garaa godhu eegalan. Mu’mintoota tokko tokkoon adamsanii gocha gara jabeenyaa irratti raawwachuu fi akka isaa jireenya hawaasummaa irraa fagaatan uggura irra kahuu jalqaban. Ergamaan Rabbii ﷺ fi hordoftoonni isaa (Sahaabonni) roorroo fi gocha gara jabeenyaa Qureeyshotaa kana dadhabnaan, amantaa isaanii walabaan geggeeffachuuf qe’ee fi qabeenya isaanii, akkasumas maatii isaanii kan akkan jaalatan dhiisanii goodanuuf dirqaman. Godaansa Kabajamaa Rabbii jecha godhamu godaanan. Isaan qe’ee fi qabeenya isaanii lakkisanii godaananis roorroon Qureeyshotaa isaan irraa hin dhaabbanne. Iddoo Isaan itti baqatan dhaquun Shira xaxuu eegalan. Muslimoonnis roorroo isaan irra gahu dhaabsisuuf kutatanii ka’an.
Bara Hijraa 2 ji’a Kabajama Ramadaanaa keessa gaafa guyyaa 17 ykn immoo akka Miilaadiyaatti March 13, bara 624tti iddoo Badr jedhamutti Lolli guddaan Muslimootaa fi Mushrikoota Makkaa jiddutti geggeeffame.
Aangoo fi Qabeenya
Bulchinsa Gaarii (Good Governance) Umar Ibnal Khaxxab
Soreessa Adduunyaa Jarraa 14ffaa
Iddoon lolli kun itti geggeeffame Makkaa fi Madiinaa jidduu yoo tahu, iddoo kanatti eela Bishaanii Badri jedhamutu argama. Iddoon kunis Badri jedhamee waamama. Moggaasni lola kanaatis iddoo kana irratti hundaa’uun Badr jechuun mooggaafame.
Sababaan Lola Badri
1. Muslimoonni Makkaa jiraatan qe’ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamuu
2. Mushrikoonni hanga Madiinaa deemuun Muslimoota rakkisuu itti fufuu
3. Mushrikoota Adaba qabsiisuu fi qabeenya Muslimootaa saamame deebisiisuuf ture.
Haaluma kanaan saamicha Qureeyshoonni Muslimoota irraan gahaniif Ergamaan Rabbii (ﷺ) akka haloo bahan, Daldala Qureeyshotaa Shaam irraa deebi’u kan Abuu Sufiyaaniin hogganamu qabeenya harkaa qabu akka irraa fuudhan ajajan. Abuu Sufiyaan immoo odeeyfannoo kana dhagayee Qureeyshoonni akka birmataniif iyyatuu isa hordofuun lolli Badri ka’e.
Waraanni Muslimaa Ergama Rabbiitiin ﷺ hogganamaa ture. Kan Qureeyshoota immoo Amri Bin Hishaam Al Makzuumiin hogganame. Lakkoofsi loltoota Muslimaa 313 yoo tahu, kan Mushrikoota Makkaa ammoo 1000 kunis waraana Muslimootaa dachaa 3’n caala ture.
Loltoonni gama lamaanii walitti dhufan. Loltoota bebeekkamoo Mushrikoota Makkaa jidduu namoonni 3 akkasumas Ansaarota jidduu namoonni 3 wal falmuuf bahan. Mushrikoonni Makkaa diduun Muhaajiroota jidduu namni sadi akka bahuuf gaafatan. Hamzaa, Aliyyii fi Ubeydaan bahan. Kuffaartonni Makkaa 3’n ajjeeffaman. Muslimoota irraa Ubeeydaan midhaame. Amma lolli jalqabame. Waraanni Mushrikootaa hedduumatuun Ergamaa Rabbii ﷺ Yaaddessee, akka Rabbiin deeggarsa godhuuf Rabbi kadhatan. Rabbiin lola kana irratti Malaaykoonni akka birmatan erge. Lola kana irratti hoggantoonni Mushrikoota Makkaa bebeekkamoon hedduun ajjeeffaman. Loltoonni Mushrikoota ofduuba baqatan. Hedduu midhamanii hedduun ammoo ajjeeffaman. Akkasumas hedduun Muslimootaan booji’aman. Lolli Badri haala kanaan Injifannoo Muslimootatiin goolabame.
Kanaaf Baatiin Ramadaanaa Baatii Injifannootis jedhama.